देबदहमा किन सधै आतंक ?:lumbinireview
देवदहमा अपराध बढ्यो भनेर हल्ला गरेको ÷भएको धेरै भयो । आज त्यो भन्दा पनि त्यसको समाधानका लागि के के प्रयास भए र गर्नु पर्छ भन्ने बिषयमा बढि छलफल हुनु पर्ने देख्छु म । किनकी जनयुद्धकालका पछिल्ला बर्षमा देवती गुरुंग, वाईसिएलको दबदबा र बिकृतिकरणः जग्गा कब्जा र दलाली, पछिल्लाचरणमा युवा संघ र युवाआन्दोलनकै भ्रष्टीकरणःदुर्गा (०७२) र बलुको हत्या(०७३) बारे चर्चा भएका छन । अहिले भर्खरै २१ बर्षिय अनिष पुरीको हत्याले पुनः देवदह तरंगीत भएको छ । तर यसको उचित बिश्लेषण अझै भएको छैन । हाम्रा सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, वैध र अवैध किसिमका आर्थिक व्यवसाय, सुरक्षा संयन्त्र र न्यायिक निकाय सम्मको अन्तरसम्बन्धीत अध्ययन विना उचित बिश्लेषण र सहि निष्कर्ष निकाल्न सकिदैन । यी सबै क्षेत्रबाट कुनै न कुनै किसिमले अपराधको संरक्षण भईरहेको छ ।
रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका तराईका ३ जिल्लाको अपराध सख्या हेर्दा बार्षिक रुपमा हत्या ६०५, लागुऔषध,१८८० वटा, मानववेचबिखन १८४, बलात्कार ९८१, आत्महत्या र अपहरण ः८१ जस्ता गतिविधीको संख्या उल्लेख्य बढेको छ ( बुढाथोकी शोभाकर २०१४÷२०१५श्रोत प्रहरी कार्यलय, सर्चफर कमन ग्राउण्ड) जनसंख्या बृद्धिले परिमाणमा फरक पारे पनि आधार कारण भने आर्थिक सामाजिक कारण नै हुन ।
देवदह नगरपालिका जिल्ला भरीमै ३ वटा कुरा अत्यधिक हुने तथ्यांकले बताउँछन ः घरेलु हिंसा, लागु औषध र्दुव्यसन र तस्करी । यी अपराधका प्रभाव मात्र हुन कारण त हामिले समाजको आर्थिक राजनीतिक चरित्र भित्र खोज्नुपर्छ ।
अपराधले प्रसय पाईरहनुका कारणः
देवदहमा शुरुमा साना तिना ठानिने कारणबाट झैझगडा र रिसईवी हुँदै ग्यांग (समुह) सघर्ष सम्म पुग्छ । प्रेम प्रसंग देखि लागु औषध, अवैध र असंगठीत व्यवसाय, आपसी भनाभन हुने, त्यो इगो पछि सम्म पालिरहने, दलहरुले आफनो मत संरक्षण गर्न जायज नाजायज कामलाई पनि काखी च्याप्ने, प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यलयलाई प्रभावित पार्ने र अपराधी छुटाउन माथि सम्मको दबाब सृजन ागर्ने, बिधीको शासनलाई पंगु बनाउने, ढुंगा गिट्टी, बालुवा, काठ तस्करी जस्ता प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहोनमा युवाहरुको प्रयोग हुने, लागु औषध, गोरु तस्करी, कुखुराका चल्ला तस्करी लगायत विविध धन्धामा टोले डनहरुको व्यवसायिक उपयोग हुँदै जाने त्यो सञ्जाल राष्ट्रिय तहकै अपराध सञ्जाल संग जोडिन पुग्ने अवस्था बन्ने । ‘बजार र मनोबिज्ञान’ यी यस्ता कुराहरु हुन जो उपभोक्तावादी पुँजीवाद संग जोडिन्छ । घरको टिभिसेट र मोवाइल टयाव सम्म आइपुग्ने सन्देशहरुले यसको विभ्रम निर्माण गर्दछन । यसले युवामा सामाजिक सञ्जाल र मुलधार मिडियाहरु मार्फत आधारभुत आवश्यकता भन्दा पनि बिलासी उपाभोग्य बस्तु तर्फ टिनएजर्सहरुको मन मस्तीष्क आकर्षित गर्छ । उनिहरु मेहनत र श्रम संघर्षमा नलागि सजिलो आयको लालषामा अर्को बाटो तर्फ लाग्छन । सार अर्थमा अति गरिबी र बेरोजगारी मुख्य कारण मान्न सकिन्छ ।
शिक्षा र बाल मनोबिज्ञान निर्माण देखि नै यसलाई सुधार गर्नु पर्छ । घरमा पनि त्यही किसिमको सष्कारीत वातावरण बनाईनु पर्छ । बसुधैव कुटुम्वकम् पुर्विय सभ्यताको पुर्नजागृती गर्दै मैत्रीपुर्ण वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि देवदहमा बौद्धशिक्षा र देवदह परिचय स्थानिय पाठयक्रम शुरु भएको छ । यस्ता अन्य प्रयासलाई प्रसय दिइनु पर्छ । सकारात्मक र सष्कारित शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । गरिबी घटाउने आयआर्जनका विकल्प र अवसर वढाउँदै रोजगारी सृजना गर्नु पर्छ । युवा उमेर समुहलाई विभिन्न समुहमा वर्गिकृत उनिहरुलाई जोडने र रुपान्तरीत गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । सामाजिक, राजनितिक संगठन, सरोकारवाला सुरक्षा र न्यायिक निकायको पारदर्शिता, मुल्यनिष्ट क्रियाशिलता, सुसाशन र जवादेहितामा उल्लेख्य बृद्धि गर्नुपर्छ । यी सबैकामको अगुवाई स्थानिय सरकारले गर्नुपर्छ । दलहरुका संगठनहरुले राजनीतिक र वैचारिक जगमा समानता, न्याय र लोकतन्त्रको मर्ममा आधारित व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ । सुरक्षा संयन्त्रको श्रोत साधन र क्षमताको विकासमा ध्यान दिँदै, समयमै न्याय निरुपण एवं न्यायीक निकायको भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण हुनु पर्दछ ।
दलहरुलाई प्रश्न ः
१. दुर्गा बलु हत्या भएपछि भएका सहमति कार्यन्वयनमा किन प्रभावकारी दबाद सिर्जना गर्न सकिएन ?
२. प्रहरी कार्यलयको दरबन्दी लगायत क्षमता बिस्तारमा भएका सहमती किन लागु गरिएन ? इन्सेपेक्टर सहित वडा प्रहरी कार्यलय तहको संरचना बनाउने । अहिले प्रहरी चौकी तहले पुग्दैन । देवदहका सुरक्षा संवेदनशिल क्षेत्रमा सिसिक्यामरा जडान गर्ने प्रयास किन सफल हुन दिइएन ?
३. किन संगठीत अपराधमा दोषि ठहरिएका र संलग्नता पुष्टी भएका व्यक्तिहरुलाई किन प्रक्रेर सजिलै थुनामुक्त गरिदै आएको छ ? न्यायलय प्रतिको बिश्वासमा धमिरा लागेको छ ।
यो सामग्रि फरक पत्रिकामा पनि प्रकाशित छ ।